Git Sangit News » अत्यन्तै धनवान हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन राशि ?
अत्यन्तै धनवान हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन राशि ?
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य उनीहरु जन्मेको समय, ग्रहको स्थिति र नक्षरको हिसाबबाट तोक्न सकिन्छ । हरेक बच्चाको नाम उसको जन्म समय, द’शा नक्षत्र, र ग्रहको स्थितिको हिसाबबाट राख्ने गरिन्छ । त्यसैले राशिले व्यक्तिको जीवनमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ ।
राशिअनुसार यो कुरालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि कुन व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुनेछ रु व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कति प्रगति गर्नेछ रु यस्तै तरिकाले ज्योतिषशास्त्रमा ४ राशिका व्यक्ति यस्ता रहेका छन् कि जो सौभाग्यशाली हुन्छन् । यस्ता राशि भएका व्यक्ति कम उमेरमै धन प्राप्ति गर्न सफल हुने गर्दछन्। जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि ?
वृष राशिको स्वामी शुक्र ग्रहलाई मानिन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई भौतिक सुख सुविधा र धन वैभवको प्रतिक मानिएको छ । यो राशिलाई शुक्र ग्रहको कृपा हुनुको कारण यो राशि भएका व्यक्ति धन प्राप्तिबाट एकदमै सम्पन्नशाली मानिन्छन् । यी व्यक्तिलाई आकर्षक चीज बढी मनपर्ने र त्यसमा नै ध्यान रहने हुन्छ । यी राशि भएका व्यक्तिलाई भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ । त्यसैले वृषराशि भएका व्यक्तिलाई जीन्दगीमा कहिलै धनको कमि हुदैन ।
सिंह राशिको चिन्ह सिंह हो । यो राशि भएका व्यक्ति निकै नै क्षमतावान हुन्छन् । सूर्यको प्रभावको कारण यस्ता राशि भएका व्यक्ति निकै तेज हुन्छन् । यी राशि भएका व्यक्तिले महंगो जुनसुकै चिज पनि ज्यादै मनपराउँछन् । र त्यसलाई किन्नको लागी धन कमाउन प्रयास गर्दछन् । जसको कारण यिनीहरुको जीवन धन,धान्यले भरिपूर्ण हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २२ भाद्र २०७७, सोमबार १५:१६